Ka ọ na-erule Ọktọba 2017, Ikwesiri Inwe Akwụkwọ Asambodo SSL | Martech Zone
Idebe ihe nchebe na-abụkarị ihe ịma aka n'ịntanetị. Nimbus Bochum emeputara ihe ngosi bara uru n'oge na-adighi anya, na-egosiputa mkpa nke ohuru transperent SSL akwụkwọ ebumnuche maka ụdị eCommerce, yana ịnye ndepụta nyocha zuru ezu iji nyere aka na ịkwaga weebụsaịtị gị na HTTPS. Ihe omuma, SSL na-agbanwe agbanwe & Otu esi eme ka weebụsaịtị gị gaa HTTPS na 2017 na-egosipụta ihe atụ nke ihe mere usoro SSL ọhụrụ a ji dị mkpa.
Fọdụ Akụkọ Horror SSL Gụnyere
Ndị nledo France - Google chọpụtara na otu ụlọ ọrụ gọọmentị France na-eji asambodo Google SSL asịrị iji ledoo ọtụtụ ndị ọrụ.
Github na China - Otu onye ọrụ na-achịkwa subdomain nke mmepe Bochum na saịtị Github e-ezighi ezi ọdịda a oyiri SSL akwụkwọ maka dum ngalaba site a Chinese akwụkwọ ikike.
Ndị Iran metụtara - Ejiri akwụkwọ ikike dijitalụ mepụtara nke DigiNotar jiri anataghị ikike banyere akaụntụ Gmail nke ihe dị ka ndị ọrụ Iran 300,000 na 2011.
Maka ebumnuche ndị a na ndị ọzọ, ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị enweghị akwụkwọ Transparent SSL site na Ọktọba 2017, Chrome ga-egosipụta weebụsaịtị gị Ọ Nọghị ná Ntụkwasị Obi, na-akụda ndị ọrụ ileta ya, na nchekwa weebụ gị nwere ike ịdị n'ihe egwu. Ugbu a bụ ezigbo oge iji banye n'ụgbọ.
Gbaa ule nnwale Google na Asambodo SSL gị
Google Akwụkwọ Nkọwapụta Akwụkwọ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, n'ihi ntụpọ nhazi na usoro asambodo HTTPS, asambodo na ịnye CA egosila na ọ ga-emebi emebi na ịme ihe. Ihe Nleba Akaụntụ nke Google Aims iji kpuchido akwụkwọ issuance usoro site n'inye ihe na-emeghe kpuchie maka nlekota na auditing HTTPS asambodo. Google na-agba ndị niile CA ume ka ha dee asambodo ha nyere iji gosipụta nke ọma n'ihu ọha, na-agbakwunye-naanị, na-egosipụta ihe ndekọ na-emetụ n'ahụ. N'ọdịnihu, Chrome na ihe nchọgharị ndị ọzọ nwere ike kpebie ịghara ịnakwere asambodo ndị edebeghị na ndekọ ndị dị otú ahụ.